Quit ဖို့ 25 အကြောင်းရင်းများ
လူသားတွေအဖြစ်သူတို့ကိုမြင်လျှင် start, အမျိုးသမီးများ objectifying Quit ။
အလိုတော်မှာ wanders သူတစ်လူလွတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ Self-ကံကြမ္မာကျော်မျှမထိန်းချုပ်နဲ့အပူတပြင်းကျွန်မပို။
အစားသငျသညျပတျဝနျးကငျြရှိလှပသောကမ္ဘာ numbed ခံရ, ဤပြင်းထန်သောစိတ်ခံစားမှုအားလုံးအချိန်ကိုခံစားစတင်ပါ။ နောက်တဖန်လမ်းလျှောက်သေပြီ။
အများကြီးလျော့နည်းအခြိနျဆှဲ။ အမှုအရာအလုပျမှာပါသို့မဟုတ်ကျောင်းအတွက်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားအောင်မြင်မှုအတွက်ရရှိလာတဲ့, အချိန်ပေါ်ပြုမိ Get ။
အသစ်တွေ့ရှိထားတဲ့စွမ်းအင်နှင့်အတူပြင်းစွာတိုက်။ ဖောရက်စ Run ကို Run.
အပျိုဖော်ဝင်ချိန် မှစ၍ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ရန်စတင်ပါ အမှန် သင်မည်သူအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်။ သင်အမြဲခစျြ၏ပေမယ့်ကံမကောင်းတာကသင်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတစ်ဦး Self-built ထောင်ထဲမှာကွာသော့ခတ်သိမ်းဆည်းထားသောမိမိကိုယ်ကိုယခုအခမဲ့ခြိုးဖောကျထှကျလာရန်အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ လူတစကလေးကမပေါက်ပါဘူး။ သငျသညျကိုယျတျောကိုစိတျငွိမျတှေ့လိမျ့မညျ။
အများကြီးလျော့နည်းတတ်ပါတယ်။ သငျသညျသငျတို့ရှေ့စိုးရိမ်နေကြခြင်းနှင့်ဒုက္ခရောက်နေခံစားရဖို့အသုံးပြုဘယ်မှာတူညီတဲ့အခြေအနေများမှာမရှိသိသာအကြောင်းပြချက်များအတွက်ပျော်ရွှင်အပြုသဘော feeling ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေတာကိုစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင့်ကိုအကောင်းဆုံးပေးပြီကိုယ်သိသောအရာကိုအဘယ်သူမျှမကိစ္စဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
တကယ်နက်ရှိုင်းစွာတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူမေတ္တာ၌, madly, truely ကျသွား၏ရှည်လျားသောဆုံးရှုံးခဲ့ရနိုင်စွမ်းပြန်လည်ရရှိ။ သတိ! သငျသညျအသည်းအသန်အစားလုပ်ကြံခြင်းနှင့်အချည်းနှီးသောသူအပေါင်းတို့, porn အတွက် zombified အသစ်အဆန်းများကမိုက်မဲ hypnotized တဲ့၏, SO တစဉ်းစားတက်အဆုံးသတ်စေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အချို့သောမျက်ရည်ဖို့အဆင်သင့်ကိုရယူပါ။
THE ED ။ မလွှဲမရှောင်ဟာ PMO စွဲအားဖြင့်စေ၏။ ငါကပိုလို့ပြောလိုအပ်ပါသလား? ပြောစရာရှိသေးလိုပါသလား
တစ်လုံလောက်အောင်ရှည်လျား Streak ပြီးနောက်သင်တစ်ဝှမ်းကလူသငျသညျအကွောငျးကိုပိုမိုပြုစုစောင့်ရှောက်စတင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းမြင်လိမ့်မည်။ ဒီအကြောင်းပြချက် NoFap မီ, သငျသညျတစျဦးတစ်ဝက်လုံးဝအချိန်၌သူတို့မျက်မှောက်ကနေပျောက်ဆုံးခဲ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါကတဦးတည်းဝက်သည်အရှက်ကွဲခြင်းကိုပေါ်တွင်တည်ဆောက်လျှို့ဝှက်တဲ့အသက်တာ၌ကိုယ်တော်တိုင်ကွာဖြုန်းအလုပ်များခဲ့ပါတယ်။ သူဟာပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ သငျသညျ၏ထက်ဝက်ကိုမှန်ကန်ကမ်ဘာပျေါတှငျမတည်ရှိခဲ့ပါဘူး။ ထိုအခါအစစ်အမှန်လောကရှိတည်ရှိခဲ့ဘူးသောအခြားတစ်ဝက်ကြောင့် PMO စွဲသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပေးနိုင်ဖြစ်ခြင်းဘယ်တော့မှ, အမြဲတစေမလုံခြုံနှင့်သူ၏သဘောထားကိုအတွက်စိတ်ကို double ဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်သည်သူတို့၏အသက်တာတွင်အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်ထက်ပိုပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဆိုရင်လူတွေကိုသင်အကြောင်းကိုပိုမိုဂရုစိုက်ရန်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ငါပစ္စုပ္ပန်ဟုပြောသည့်အခါ, ငါလက်ရှိဆိုလို။ သြဇာ။ အထင်ကြီးစရာ။
သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၌သင်တို့၏သုက်ပိုးကိုစောင့်ရှောက်သောကြောင့်, ခြုံငုံရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ အဲဒီအကြောင်းကိုဖတ်ပါ။
NoFap ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားကစားရုံနှိပ်စရာမလိုဘဲအများကြီးပိုခက်သောကွောငျ့သငျသညျ, သငျသညျဖြစ်ကောင်းလိမ့်မည်သည့်တက်ကြွစွာသင်သိလည်းထွက်အလုပ်လုပ်ကြောင့်ကျန်းမာရေးကို add နိုင်ပါတယ်။ ကိုရယူပါ။ ၌တည်၏။ ပုံဖော်!
သင့်ဦးနှောက်သက်ရောက်မှုသင့်ရဲ့အပြုအမူကိုဘယ်လိုပလတ်စတစ်ဖွဲ့စည်းပုံပေါ်တွင်သင်၏အသိပညာကျွမ်းကျင်။ သို့ယခုအသစ်ခေတ်သစ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှု neuroplasticity YBOP မှတဆင့် NoFap လုပ်နေတာတစ်ခုနောက်ဆုံးနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသည်နှင့်အပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ် တိုင်း သငျသညျကအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုပေါ် မူတည်. သင့်အသက်တာ၏ရှုထောင့်။
ပိုပြီးဖန်တီးမှုအရင်ကထက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျက၎င်း၏အကြီးမားဆုံးနှစ်သိမ့်ဇုန်စွန့်ခွာရန်သင့်ဦးနှောက်ကိုအတင်းအကျပ်နေကြသည်။ ဒါကြောင့်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့သစ်ကိုအာရုံခံဆဲလျလမ်းကြောင်းအတူတက်လာဖို့ရှိပါတယ်ဆိုလိုသည်။ သူများသည်သစ်ကိုလမ်းကြောင်းသစ်ကိုစိတ်ကူးများကိုဆိုလိုတာ။ နယူးစိတ်ကူးများသင်နှင့်အတူအလုပ်ရှုပ်သင့်ဦးနှောက်ကိုစောင့်ရှောက်နေကြသည်သမျှအတွက်ပိုကောင်းတဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုဆိုလိုတာ။ သင်၏အသက်တာတီထွင်။
willpower အတွက်ကြီးမားတိုးတက်လာခဲ့သည်။ willpower တစ်ခုမှာ badass ခြင်္သေ့သည်။ ဘယ်လိုခက်ခဲတတျနိုငျသ တခုခု PMO ဖြတ်ဖို့နှိုင်းယှဉ်ဖြစ်? အစဉ်အဆက်အဘယ်သူမျှမပွဲ။ အဘယ်သူမျှမအတားအဆီးများသည်သင်တို့တဘက်၌အခွင့်အလမ်းရပ်နိုင်ဘူး။
အာရုံစူးစိုက်မှုသံလိုက်။ သင်မှန်အောင်လုပ်နေလျှင်သင်သွားလေရာရာ၌ဤအပြုသဘောဆောင်သောစွမ်းအင်အားလုံးကိုမလွှဲမရှောင်သာဖြာထွက်လိမ့်မည်။ လူတိုင်း - အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများ - သည်သင့်ကိုဘယ်နေရာမှသတိပြုမိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့သည်သင့်ကိုမြင်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အလေးအနက်ထားပြီးကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောအရာကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ သို့သော်သင်စဉ်းစားမိသောအခါကမှော်ဆန်သောအရာတော့မဟုတ်ချေ။ သင်၏သဘာဝကိုသင်လုပ်ဆောင်သောအခါသဘာဝက၎င်း၏လမ်းပြမှုကိုခံသည်။
အထူးသဖြင့်အချို့အချက်ပြီးနောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲစတင်ရန်ကိတ်မုန့်၏အပိုင်းအစ။ သင်ပင်စဉ်းစားရန်မလိုပါ။ အများကြီးလျော့နည်း Self-သတိ။
သင်ကိုယ်တိုင်အမြဲဖုံးကွယ်ထားရမည့်သူနှစ် ဦး ၏ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောခံစားမှုမျိုးမရှိတော့ပါ။ မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေမှုထက်ရှာတွေ့သည်ထက် ပို၍ ခံစားမိစေပါသည်။ အားလုံးနှင့်အတူရိုးသားမိမိကိုယ်ကိုနှင့်အတူရိုးသား။ သငျသညျတစျခုတပြင်လုံးကိုပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်ကြသည်။
အဖြစ်ကောင်းစွာနဲ့အခြားမကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ Get ။ NoFap သင်၏အသက်တာများအတွက်ကောင်းသောဒိုမီနို effect ကိုစတင်။
တစ်ဦး 1 အတွက် 1,000,000 ဖြစ်လိမ့်မည်။ တကယ်ပဲ။
PMO လုပ်ဖို့ 1 အကြောင်းပြချက်:
သငျသညျလူသားတစ်ဦးနဲ့မတူပဲဒါပေမယ့်ရေရှည်မှာအတွက်, ဤအရာအလုံးစုံစရိုက်များ၏မရှိခြင်းလွှဲမရှောင်သငျသညျအပေါ်သေဆုံးသူယူသွားရာတစ်ဖုတ်ကောင်ကဲ့သို့အစားဤအရာအလုံးစုံကိုမှန်ကန်စရိုက်များရရှိတစ်ဦးဟင်းသီးဟင်းရွက်များစိတ်ကျေနပ်မှုဘဝကိုထိန်းသိမ်းရန်နိုင်အောင်, ကိုယ့်ကိုယ်ထုံ တိတ်ဆိတ်ဆိုးဆိုးရွားရွားငါသည်သင်တို့ကိုအလေးအနက်ပြောကြားလိုပါတယ်။
ဒီမှာပွဲစဉ်တောင်မှရှိသေးရဲ့လား။ ကျွန်တော်အဲဒီလိုမလိုချင်ဘူး PMO သည်သင်၏သတိကိုပိတ်ထားရန်နှင့်အလွန်အရေးကြီးသောအကြောင်းပြချက်များအားလုံးကိုမျက်စိကန်းစွာလျစ်လျူရှုရန်ထူးဆန်းသောစွမ်းအားရှိပါက PMO သည်အလွန်ထူးခြားသောအရာဖြစ်သည်ကိုသင်သိသည်။ ငါဆိုလိုတာကမင်းသိရင် PMO ကမိုက်မဲတာပဲ။ ဒါကြောင့်အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အကျိုးခံစားခွင့်အားလုံးကိုပေးမယ့်ဆေးတစ်ခုတည်းရှိရင်ငါဝယ်ယူရသမျှအားလုံးကိုငါပေးမယ်။ ကြည့်ရတာဘယ်သူမှမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့် NoFap လည်းမရှိဘူး။ ငါ NoFap လုပ်ဖို့နဲ့ PMO ကနေ run ဖို့ငါလုပ်ရသမျှအားလုံးကိုငါပေးမယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဟာငါလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိပြီးငါ့ဘဝမှာတခြားလမ်းမရှိတော့ဘူး။
အားလုံး Fapstronauts ဖို့အကောင်းဆုံးပတ်သတ်ပြီးနှင့်အကောင်းဆုံးဆန္ဒကို!
Edit ကို: ငါဒီပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရုံနဲ့ယနေ့ညညငါ့အိပ်ခန်းနံရံပေါ်မှာချိတ်ဆွဲထားတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ကောင်းသောမိမိကိုယ်ကိုသတိပေးမှုသည်ဤစာကိုကျွန်ုပ်၏နားမထောင်သောသူများထံစာရေးရန်ဖြစ်သည်။
Thread ကို LINK - အကြောင်းရင်း ၂၅ ခု